Mar dambe Googling ... laakiin waad Yahoo! | Martech Zone
Mar dambe Googling… laakiin waad Yahoo!
Axad, Agoosto 20, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
The Seattle Times waxay soo warinaysaa in Google ay daba socoto dad akhyaarta adeegsanaya ficil ahaan. Xajka Suuq geynta ayaa helay wax weyn post blog ka yimid Yahooer oo leh… ma kari kartid Google laakiin waxaad xor u tahay Yahoo!
Hal dhaqdhaqaaq baaxad leh, Yahoo! waxay noqotay mid qabow oo Google wuxuu noqday jerk shirkadaha. Waxaan sameeyay xoogaa karti ah mana aanan arag faallooyin ka yimid Google sababta ay u doorteen inay qaadaan tallaabadan. Waxay iila muuqataa inay tahay farsamayn suuqgeyn fayras oo weyn… u soo bandhig adduunka fal cusub oo magacaaga ganacsi ku jiro, oo ma ka caban doontaa? Waxa xigta ee aad ogtahay in warshadaha muusiggu isu rogi doonaan jerks oo waxay bilaabi doonaan inay dacweeyaan dadka oo wadaaga muusikada weyn! (Oh sug…)
Waa inaan booqdo xarunta Google anigoo safar shaqo ku jooga sannadkii hore. Waxaan la yaabay xerada, mootooyinka, kushiinka, kuraasta duugista, iwm. Fikrado yar ayaa madaxayga ku soo dhacay… wow, cool, meeshan lacag aad u badan bay leedahay, dadkanina waxay isticmaali karaan xeerka labiska! Laakiin hadda waxay u muuqataa in 'shirkadaha' ay hadda si rasmi ah u joogaan xerada. Mid ka mid ah tilmaamaha tani waxay ahayd markii Guriga Cambrian waxaa laga furay xerada kadib markii la isku dayay in Google lagu quudin karo kun pizzas.
Shirkadaha runtii ku guuleystey ku saleysan suuqgeynta fayraska, waa wax la yaab leh marka ay fursaddu timaaddo inay runtii muujiyaan sida 'qabow' ay u sheegaan inay yihiin, waxay si fudud u noqdaan nacas. Best Buy wuxuu sameeyay tan sanadkii la soo dhaafay markii Improv Meel walba ay ka soo muuqdeen dhowr boqol oo qof oo u ekaa shaqaalaha Best Buy oo markii dambena ay dhibsadeen, booliska ayaa wacay, waxaana la siiyay kabaha.
Qadka hoose, haddii aad u sheegayso dadyowga inaad cusub tahay, sinta, qabow, bamka, dhagan, iwm… Google ayaa 10 digrii hoos ugu dhacay heerkulbeeggayga qaboojiyaha.
Fadlan ha ka noqon gmailkayga, akhriste, Analytics, khariidaynta api, madasha wada -hadalka, ama xisaabaadka bogga hoyga google. Wali waxaan u malaynayaa inaad tahay qof fiican. Kaliya maahan as qabow.
Yahoo! waa inuu ka faa'iideystaa fursaddan. Miyaad yahooing?
Warshadaha Filimada IV - Masaska Diyaaradda
Khaladkooda Maaha Ee Waa Adiga
Agoosto 21, 2006 saacaddu markay ahayd 4:16 PM
Google waa inuu ilaaliyaa magiciisa hadii kale wuxuu waayi doonaa xuquuqdiisa iyo bogag walboo qaawan ayaa adeegsan kara erayga si taraafikada loo soo jiito. Dabcan Yahoo wuxuu kaa doonayaa Yahoo! fal ahaan. Xusuusnow xayeysiisyada TV-ga ee la weydiiyay "Ma Yahoo Yahoo !?" Nasiib darrose, qofna ma sameyn Yahoo. Laakiin iyada oo aan wax xayeysiin ah jirin, dadku waxay bilaabeen Googling. Sidee cunaqabateyn loogu saarayaa Yahoo! Ma xayeysiin kartid ama ma codsan kartid qabow, taas oo ah waxa kuu beddelaya fal.
Arrinta Guriga Cambrian waxay muujineysaa Google qeybta weyn ee mugdiga ah: waa sir. Qof walba cagtii cagta ku marta hantida Google iyada oo aan la casuumin ayaa laga furaa. Waa layga furtay. Waxay ahayd halkii madadaalo.
Agoosto 21, 2006 saacaddu markay ahayd 6:07 PM
Waxaan jeclaan lahaa inaan kugula raaco adiga oo u baahan Google si loo ilaaliyo xuquuqdeeda; si kastaba ha noqotee, marwalba waxaan u arkaa mid xiiso leh in shirkaduhu aysan cabanin illaa lacagta ay socoto. Google kama cabaneynin sidii bilowgii markii ay dadku bilaabeen inay adeegsadaan ereyga 'googling'; waxay u badan tahay inay u gaajoodeen feejignaanta. Si kastaba ha noqotee, hadda markay awoodaan waaxda sharciga, waxay umuuqataa mid aan daacad ahayn hadda waxay isku dayayaan inay ilaaliyaan magacooda wanaagsan.
Tani waxay la mid tahay warshadaha diiwaanka. Markaad tahay muusikiiste jaban, waxaad ka codsaneysaa dadyowga inay dhagaystaan… markaad tahay milyaneer badan, waa inaad la baxdaa RIAA oo aad bilowdaa dacwaynta.